Dhizaini yePcb, Pcb Technology, Circuit Board - Pandawill
Kugadzira uye kusimudzira maitiro
Ita icho chaicho padanho rekugadzira
Pandawill inopa PCB dhizaini rutsigiro kwete chete sekutsanangura zvatinoda, asi zvakare zvatinoita neyako dhizaini kubva pakutambirwa kwedata kusvika kune chakapedzwa chigadzirwa. Pcb dhizaini inosanganisira: Yakakwira-Yekumhanya, Analog, Dhijitari-analog Hybrid, Yakakwira Density / Voltage / Simba, RF, Backplane, ATE, Soft Board, Rigid-Flex Board, Aluminium Board nezvimwe.
Multilayer, HDI, nekukurumidza kutendeuka
Pandawill Circuits inogadzira uye inopa akawanda emhando yepamusoro yemhando yepamusoro yakadhindwa wedunhu bhodhi matekinoroji, mavhoriyamu, mutengo uye kugadzira nzira dzekutungamira-nguva zvinoenderana nekunzwisisa kwedu kwakakosha kwePCB uye gungano maitiro uye zvaunoda.
Kupa Hunhu, Kuendesa Kuchinjika, Inotarisirwa Mari
Neboka rine ruzivo uye rine hunyanzvi rekutenga, isu tine hunyanzvi hwekuona sarudzo dzekutsvaga zvichienderana nezvinodiwa zvechigadzirwa chimwe nechimwe nemutengi uye zvinopa zvakagadziriswa zvikamu zvekutsvagisa, kuendesa kuchinjika, kudzikisira mutengo uye kunyangwe manejimendi manejimendi.
Kubva prototyping kusvika kugadzirwa kwakawanda
Nezvose zviri zviviri kuburikidza neburi (THT) uye pamusoro pegomo (SMT) musangano kugona, ese akatungamirwa uye RoHS inoenderana iripo, yedu PCBA sevhisi yebasa kubva kumumvuri kuenda kuenderera kugadzirwa kwezvakaoma, multi-tekinoroji PCB magungano mune akaderera kusvika epakati mavhoriyamu.
BHUKU BUILD & MECHANICAL GUNGANO
Kutsigira iwe kubva A kusvika Z
Pamusoro pePCB gungano rebasa, isu tinopa bhokisi kuvaka gungano rekubatanidza kwema-sub-masystem uye ma module pamwe nekuzara kwechigadzirwa kusangana. Kuburikidza netiweki yedu yevanoda vatengesi, tinokutsigira kubva kuA kuenda kuZ, kubva pakutaurwa kusvika padanho rekugadzira reprojekiti yako.